Afọ ole ka ha na-ebi ndụ rabbits na-achọ mma, na-agbagwoju anya ma dwarf na otu esi emewanye oge a? - Ugbo - 2019
Oge na oge ndụ nke oke rabbits dabere na ọnọdụ anụmanụ na ụdị nri.
Mana ọ bụghị naanị na ihe ndị a dị oke aka. Ụdị ọ bụla nwere kpọmkwem ọnụ ọgụgụ ịdị adị ya.
Kedu ihe na-emetụta ụdị ndụ ndị ornamental?
Mmetụta nke ụdị na rabbits
N'okike, rabbits na-adị ndụ karịa ndị ogbo ha. Ha na-alụ ọgụ mgbe nile maka nlanarị, na nnukwu ihe gbasara nke puru ibu onye na-eri anụ.
Ka rabbits na-ebi n'ụlọ ogologo oge, ọ dị mkpa ka ị ghara ichefu iji nye ha ọgwụ mgbochi kwesịrị ekwesị, iji gwọọ oge ma ọ bụrụ na ị nwere mmerụ na ọrịa.
Ụfọdụ ndị na-eche na ụdị ahụ adịghị emetụta ọnụ ọgụgụ nke afọ. Ma otu ihe ahụ, ọnụ ọgụgụ nke ụdị anụ ọ bụla nke anụ ụlọ a na-enweta.
Ọ gaghị ekwe omume ịnye ọnụ ọgụgụ zuru ezu, nzaghachi nye ajụjụ nke ogologo oge ụmụ anụmanụ a na-ebi ndụ. Ma, e nwere ọtụtụ ndị na-egosi. Rabbits nke ìgwè a n'ụlọ nwere ike ịdị ndụ ruo ihe dịka afọ iri na abụọ.
E jiri ya tụnyere rabbits, bụ nke na-enwe ọnọdụ ndụ ma ọ bụ naanị otu afọ ma ọ bụ abụọ. E dekọrọ ihe ndekọ mgbe otu oke bekee a na-achọ mma na ụlọ biri ruo afọ 18.
Ọdịdị nke oke bekee a na-achọ mma bụ, n'ogologo, ubé ogologo karịa ndị ogbo ya na-eguzo ọtọ - Afọ 7-8. Egwu rabbit na-erughị ala, n'ihi ya, ha apụghị ịnwụ site na nrụgide nke egwu ụjọ na-atụ. E nwekwara ihe a chọpụtara na obere anụ ahụ, nke na-adịchaghị ndụ.
Ọ bụrụ na a mụrụ oke bekee ọhịa ma biri na ọnọdụ okike, mgbe e mechara kpọghachite ya n'ụlọ, mgbe ahụ, ọ ga-abụ na obere anụ ahụ ga-adị ndụ ogologo ndụ. Ha na-ebi ndụ ruo afọ abụọ, mana na nlekọta kwesịrị ekwesị nwere ike ịdị ndụ ruo afọ 5-10.
Ọ bụrụ na ị maghị esi emepụta flowerbeds site na ihe ndị na-ekpuchi, lee anya ebe a.
Edere olulu compost nke a n'isiokwu a.
Kedu otu kacha mma iji chekwaa carrots: //selo.guru/ovoshhevodstvo/ovoshhnye-sovety/kak-hranit-morkov.html
Ya mere, ihe ndị dị aṅaa pụtara maka ndụ nke oke bekee:
Nne m na nna m. Ọtụtụ ọrịa na-ebute site na mkpụrụ ndụ ihe nketa;
Nri (nri kwesịrị ekwesị), nlekọta na nlekọta. Kemgbe nwata, obere rabbiti nwere ike ịkụzi tractestive nke ọma, nke a nwere ike inwe mmetụta dị njọ n'ọdịnihu ya. Dwarf ornamental rabbits bụ softer karịa ụdị ndị ọzọ;
Ahụhụ, oyiebu n'oge ndụ. Iji mee ka ọ dị ogologo oge ị na-eme ka ị ghara ịhapụ ya, anaghị ekpughe oyi na ọrịa ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume izere oria, ọ chọrọ ọgwụgwọ;
Ụzọ ndụ. Maka ụmụ anụmanụ ndị a, ịdị na-aga n'ihu na ọrụ dị ezigbo mkpa. Ha kwesiri ka ha gaa ije ije. N'ụbọchị, ịhapụ oke bekee site na ụlọ dị mkpa ọtụtụ ugboro ma ọ dịkarịa ala maka njem nke otu awa.;
Ndị dọkịta na-ekwenye na ezé rabbits na-adị ndụ ogologo oge. Nke a bụ eziokwu karịsịa n'ịmụ ụmụ nwanyị. Ozu nke nwanyị a na-atụgharị akwa ga-adị obere n'ihi ịmụọ nwa na inye nri, ya mere, anụ ụlọ ahụ ga-adị ndụ ogologo oge.
Ná nkezi, rabbits a na-achọ mma na-ebi n'ụlọ ihe dị ka afọ anọ.
Ihe ịrịba ama nke ịka nká ga- ọnụ ọgụgụ na arụ ọrụ, obere oge ejiri na-emegharị, anya na-adọrọ adọrọ na ntanye nke uwe ahụ, ikiri afọ. Ọ bụrụ na ọ nweghị ihe ịrịba ama ndị ọzọ na-echegbu onwe gị, mgbe ahụ, obere anụ ahụ na-agbagha oge ịka nká.
Ya mere, ka oke bekee bie ndụ ogologo na obi ụtọ:
nye ya nri n'ụzọ kwesịrị ekwesị;
nye ọrụ kachasị;
Na gallery anyị anakọtara ụfọdụ foto na-adọrọ mmasị, anyị na-atụ anya na ị ga-enweta ya.
[mgbagwoju anya id = 7]
N'ikpeazụ, jide n'aka na ị na-ekiri vidiyo banyere rabbits.
Esi lekọta umu ozo na oge opupu ihe ubi
Ojiji nke lemon balm: uru na nsogbu
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Afọ ole ka oke rabbits a na-achọ mma?